Global Voices teny Malagasy · 14 Jona 2012
14 Jona 2012
Tantara tamin'ny 14 Jona 2012
Azia Atsinanana14 Jona 2012
Ny 7 May 2012 dia nanambara ny sampandraharaha Koreana misahana ny Sakafo sy ny Fanafody fa ny fanafody fampiasa maika ho fisorohana ny vohoka, fantatra amin'ny hoe morning-after pills, na 'Pilina raisina ny ampitson'iny' dia ho azo jifaina malalaka. Na izany aza, ireo pilina atelina ho fisorohana vohoka izay namidy...
Amerika Latina14 Jona 2012
ilay mpihira Maria Rita dia nanao andianà fitetezam-paritra tao Brezila nanao seho maimaim-poana ho fanomezana voninahitra ny reniny efa nodimandry, Elis Regina, iray isan'ny endrika malaza amin'ireo mpiantsehatra mpiangaly mozika Breziliana. Lasa lohahevitra noresahana be tao amin'ny Twitter nanerana an'i Brezila sy izao tontolo izao ilay izy satria ireo mpankafy...
Afganistana: Tovovavy Voapoizina Noho Izy Ireo Nandeha Tany An-tsekoly
Azia Afovoany sy Kaokazy14 Jona 2012
Nofoanana taorian'ny nianjeran'ny fitondrana Taliban tamin'ny 2001 ny tsy fahazoan'ireo tovovavy sy vehivavy mianatra, mitohy mandeha an-tsekoly ireo ankizivavy mpianatra. Tao anatin'ny fanafihana kely vao haingana tany Takhar faritany Afghan any avaratra atsinanana, tovovavy anjatony no voapoizina tao amin'ny sekoliny.
Oganda: Maneho Ny Fanohanan'izy Ireo Ny Ekipa Nasionaly Ao Amin'ny Twitter, Facebook Ireo Mpampiasa Aterineto
Afrika Mainty14 Jona 2012
Amin'ny faran'ity herinandro ity dia ho any Angôlà ireo Cranes hanomboka ny fifanintsanana hiadiana ny ho Tompon-daka Eran-tany 2014.. Hotanterahina amin'ny daty hankalazana ny Andron'ireo Maritiora Ogandey io lalao io, izay tanterahina ny 3 Jona isan-taona. Maneho ny fanohanany tsy ho faty ny Cranes i Oganda, mampiasa ny Twitter sy...